Sesie Bonsi's Amanqaku kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Sesie Bonsi
Phantse wonke umntu uyoyika ukukhuphela enye i-app njengoko behlala phantsi kwisidlo sangokuhlwa kwindawo yokutyela. Njengoko i-Covid-19 iqhuba imfuno yoku-odola ngaphandle koqhagamshelwano kunye neentlawulo, ukudinwa kwe-app kwaba luphawu lwesibini. Itekhnoloji yeBluetooth isetelwe ukuba ilungelelanise le ntengiselwano yezemali ngokuvumela iintlawulo ezingachukunyiswanga kuluhlu olude, ukusebenzisa ii -apps ezikhoyo ukwenza oko. Uphononongo lwakutsha nje luchaze indlela ubhubhane okhawulezise ngayo ukwamkelwa kwetekhnoloji yentlawulo yedijithali. 4 kwi-10 abathengi base-US baye